သူကလိုချင်တာရှိရင် ချက်ချင်းဆိုသလို ရကိုရမှကျေနပ်တယ်။ မကြိုက်တာတွေကိုတော့ လှည့်ကိုမကြည့်တတ်ပါ။ ဥပမာ - ကျောင်းမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဘာသာကိုသာ အမှတ်အများဆုံးရအောင် ကြိုးစားပင်မယ့်၊ အခြားဘာသာတွေကိုတော့ မေ့နေတတ်တယ်။
စဉ်းစားပုံက ရိုးရှင်းတာကြောင့် အရှေ့မှာရယ်နေပြီး အနောက်မှာမကောင်းပြောတာ မရှိပါ။ လူတွေကိုမြှောက်ပင့်ပြီးတော့လည်း မပြောတတ်သူပါ။ဟန်လည်းဆောင်တတ်သူပါ။
၀၈. တကယ်ကို ရိုးသားသူပါ
လေးစားသူတွေရဲ့အကြံပေးချက်ကို အမြဲဆိုသလိုနားထောင်တတ်သူပါ။ အခက်ကြုံနေသူကိုတွေ့ရင်ကူညီဖို့ရန်အသင့်ရှိနေသူပါ။ ငိုနေသူတစ်ယောက်ရှိနေရင် သူလည်းလိုက်ငိုတတ်သူပါ။
၀၉. ချက်ချင်းဆိုသလို ကောက်လုပ်တတ်သူပါ
၁၀. ပြောင်းလဲသင့်တယ်ဆိုရင်လည်း ချက်ချင်းပါ
၁၂. ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးကို ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိတယ်